OKUSHA...#9 Sea Turtle Bungalows@Johns Pass-Studio/1B - I-Airbnb
OKUSHA...#9 Sea Turtle Bungalows@Johns Pass-Studio/1B
Madeira Beach, Florida, i-United States
Ikamelo e-i-bungalow ibungazwe ngu-Suzan
U-Suzan Ungumbungazi ovelele
I-Studio Bungalow yethu ethokomele eyabantu abangu-2 ppl, futhi ikuhlinzeka ngakho konke okudingayo ukuze ujabulele ukuvakasha kwakho. Umbhede wegwebu lokukhumbula usayizi weNdlovukazi kanye negumbi lokugezela elinesitayela se-spa. Lesi sikhala sine-50” Smart HDTV, isiqandisi esincane, imicrowave, umenzi wekhofi kanye necom. ikhofi. Le yunithi ine-patio yomuntu siqu yokuphumula futhi itholakala enhliziyweni ye-John's Pass, izinyathelo ukusuka ku-boardwalk/idolobhana kanye nohambo olufushane oluya ogwini.
Lesi sakhiwo se-bayfront sifaka ama-bungalows ayisishiyagalolunye asanda kulungiswa atholakala enhliziyweni ye-John's Pass. Amayunithi 1 - 7 anegumbi lokulala eli-1/ Igumbi lokugezela elingu-1 Iyunithi #8 iyigumbi lokulala eli-2 / yokugezela eyi-1 kanti Iyunithi #9 iyistudiyo. Fika ngesikebhe noma ngemoto! Kudokhu lethu langasese jabulela i-BBQ, ukubukela izinyoni namahlengethwa, ukudoba noma ukudoba nge-kayaking. Sebenzisa imishini yethu yasebhishi kulo lonke uhambo lwakho lokuya Olwandle.
I-John's Pass Boardwalk & Village inezitolo ezingaphezu kwe-100, izindawo zokudlela, izitolo ze-Ice Cream & Izikhangibavakashi. Jabulela isidlo sasemini eseceleni kwedokodo ngenkathi amahlengethwa ebukele, qasha i-jet ski noma uthathe uhambo lwesikebhe. Futhi ungachitha amahora e-Madeira Beach enhle.
With a long history in hospitality we look forward to hosting your vacation needs. We know you have a choice and we thank you for giving us the opportunity to serve you!
Sicela usithinte ngombhalo noma ngocingo noma nini. Silwela ukuthi zonke izihambeli zethu zibe nesipiliyoni sezinkanyezi ezi-5.
USuzan Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Madeira Beach namaphethelo